YouTube-DL Yakabviswa kubva kuGitHub neRIAA Order | Linux Vakapindwa muropa
Iyo RIAA iri kuenda kune vekutora mavhidhiyo, yekutanga kudonha yave iri YouTube-DL
YouTube pasina mubvunzo ndiyo inonyanya kushandiswa vhidhiyo papuratifomu pasirese. Kune vazhinji vedu vanoishandisa zvese kuisa mavhidhiyo edu uye kuona evamwe vashandisi nemakambani, asi dzimwe nguva hazvina kukwana kuti isu titarise vhidhiyo uye isu tinoda kuitora kuti tione kakawanda uye pasina kubatana. Chimwe chezvishandiso iyo yakashandiswa zvakanyanya muLinux yakadaidzwa YouTube-DL, uye tiri kutaura munguva yakapfuura nekuti haichakwanise kutorwa pasi.
Iye munhu ane basa anga ari iye Rekodhi Indasitiri Association yeUnited States, RIAA yezita rayo muchirungu, iro rinotarisa kwaro software iyo inoshandiswa kutyora kodzero dzekopirita, senge vamwe vatora vhidhiyo. Izvi ndozvinoitika neYouTube-DL, pamwe nekuti inogona kushandiswa kurodha kunyangwe iwo mavhidhiyo ayo asingafanire, kusiyana nezvinoitika nemasevhisi seaya anopiwa SaveFrom.net Ivo vanongotishandira kana iyo vhidhiyo isina kuchengetedzwa neimwe nzira.
1 YouTube-DL inoderedzwa paGitHub
2 Uye izvozvi?
YouTube-DL inoderedzwa paGitHub
Kana tichienda izvozvi kune iyo YouTube-DL GitHub peji, tinoona chirevo chinoratidzika kunge chakatumirwa ne RIAA, iyo inoverenga ingangoita 85% yekudyiwa kwemimhanzi yakanyorwa zviri pamutemo muUnited States, uye anoti musangano «inopihwa mvumo yekumiririra makambani enhengo dzayo munezvinhu zvine chekuita nekutyorwa kwenyaya dzayo dzakarekodhwa, mabasa ekuona pamwe nemifananidzo, kusanganisira kumisikidzwa kwekodzero dzayo uye nemutemo wakajairika paInternet.«. Naizvozvo, uye pasi pekutyisidzirwa kwekumhan'arirwa, vagadziri vayo vakabvisa YouTube-DL kubva kuGitHub.
Uye kwete izvo chete: muchirevo, iyo RIAA inotaura zvakare izvo kune akawanda mapurojekiti anoshandisa kodhi yako uye ivo vanoti ivo vanokanganisa iwo iwo maruramiro, kwavasina kutaura chinhu asi vanoreva kuti iyo RIAA inogona kutora, uyezve inotarisirwa kutora, iwo iwo matanho akafanana kwavari.
Izvo pachezvangu zvinoita kuti ndinetseke zvishoma ipfungwa: inofungidzirwa kuti zvaityorwa neYouTube-DL yaive chikamu 1201 chemutemo weKopiraiti weUnited States, uye mairi hapana chinogona kudarika zvinyorwa zve DRM zvinorambidzwa. Ini ndinotaura izvi kuti ndiratidze wega, nekuti Firefox haitibvunze kuti tishandise DRM kutamba zvirimo paYouTube, asi tichifunga kuti "DR" inomiririra "Kodzero Dhijitari", vanoita kunge vanoputsa chikamu ichocho. Izvo hazvirambidze chete kugoverwa kwezvakachengetedzwa zvemukati, asi zvakare zvinotyora zvidziviriro zvadzo uye zvinodzokorora.
Dai iwe waishandisa YouTube-DL, iwe unofanirwa kunge uchikwanisa kuishandisa, chero bedzi usingaibudise. Kune avo vasisina, kuchine nzira dzekurodha zvirimo kuYouTube sezvakaita YouTube-DL, kutanga nezvataurwa pamusoro SaveFrom.net, TubeNinja.net kana dzimwe nzira, senge jdownloader kana imwe yatinogona kushandisa kubva kuFirefox yatino tsanangura mubhurugwa rehanzvadzi yedu, pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo RIAA iri kuenda kune vekutora mavhidhiyo, yekutanga kudonha yave iri YouTube-DL
Saka chii? Ini handidhawunirodhi mavhidhiyo eYouTube, asi ndinoziva kune nzira dzisingaverengeki dzekuzviita, kubva pamapeji ewebhu akareruka kuenda kuzvirongwa, maapplication eApple, sezvo vachifanira kupedza zvese, ivo vanozove nazvo zvakaoma, hahaha .
Zvakanaka ini ndinoona ichi chitsotsi.
Ndokunge, iwe waifanirwa kumhan'ara evanotora mavhidhiyo, kuti ugone kunyorera ku-account yavo yepremiamu, iyo kana vakurega uchitora mavhidhiyo.
Hapana, machinda eGoogle .. kuti muri vachena kora vanobiridzira. Vanobva vaenda ndokuzivisa mitero yavo muIreland ... uyai .. fuck off ..
Wow, mune yangu kesi ini ndinoshandisa iyo yekuwedzera-inokurudzirwa neMozilla Vhidhiyo DownloadHelper kurodha pasi mune iripo fomati uye kuishandura kuita fomati yandinoda zviri nyore, saizvozvo, ini ndinoshandisa imwe yekuwedzera-iyo iyo Mozilla isingakurudzire ichiri kunzi Youtube Subtitle Downloader iyo inondibvumidza sezita rayo zvarinotaura tarisa runyorwa rwezvinowanikwa zvinyorwa zvidiki zvepi zvese vhidhiyo ye youtube uye udhawunirodha mu .srt faira
Pindura Miguel Rodríguez
isina kutumidzwa akadaro
hakusi kuguma kwenyika, ivo vari pa gitlab:
Pindura kune asina kutumidzwa
Pluto TV inogara muSpain, inosanganisirwa muLinux yeRaspberry yako Pi
Ubuntu Budgie 20.10 "Groovy Gorilla" inouya nekuvandudzwa kwenzvimbo, maapplet uye nezvimwe